မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: TeTeTuTu Game
Posted by mabaydar at 4:32 AM
ဟား ဟား ဟား..ရယ်ရတာအူတွေတောင်နာတယ်။ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ သူငယ်ချင်းတွေ မောင်နှမတွေ အများကြီးများနဲ့။ ဘလော့ဒေးနေ့ကကစားခဲ့တာလေး ပြန်သတိရတယ်။
9/11/2008 12:22 PM
Star Wars.. Attack of the Clones!!